Indawo yokuhlala yokuthuthuzela kunye nedama lokuqubha elishushu ePays Basque - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yokuthuthuzela kunye nedama lokuqubha elishushu ePays Basque
Igumbi elihle elitofotofo elinamagumbi amabini aneebhalkhoni ezi-2, 1 kwigumbi lokulala eliphindwe kabini, i-1 edibana neveranda yegumbi lokuhlala elinombono wedama lokuqubha kunye neentaba. Le ndlu ikwindawo yokuhlala yabucala eSouraide, ilali eselumelwaneni yase-Espelette, enokufikelela simahla kwindawo yokuqubha yangaphandle eshushu kunye nehektare enye yeendawo eziluhlaza kubandakanya indawo yokudlala yabantwana.
- Ikhitshi enezixhobo
-I-oven ye-microwave, i-dishwasher
-Umatshini wekofu weSenseo, umenzi wekofu wokucoca, iketile, itoaster
-Itheyibhile yegumbi lokuhlala + ibhentshi yegumbi lokuhlala (ithuba lokulala umntwana ukuya kuthi ga kwi-12 leminyaka ubudala) + izitulo ezi-2
-Isikrini esisicaba: ukuxhoma eludongeni
- Itafile yeTerrace + 4 izitulo
- Izitya + izixhobo zasekhitshini
Iiduvethi + imiqamelo + imiqamelo (sibonelela ngelinen yokulala)
- Isithintelo esongwayo kwibhedi yomntwana
- Ukuhlamba umntwana
- Ibhedi ye-umbrella
- izifudumezi zombane (ukongeza kubushushu obudibeneyo)
4.72 · Izimvo eziyi-166
Kuba iimfuno zakho ukutya kunye neminqweno yakho ezivenkileni, nendawo yokuhlala yaye ibekwe meters 200 ukusuka iivenkile lali, imizuzu 2 ukusuka kwiziko kwidolophu Espelette kwakunye imizuzu-10 ukusuka kumda Spanish (Dantxaria, 15 ukuya ku-20 imizuzu ukusuka Col d ' Ibardin).
Njengoko nokuphumla, unako Lac de Saint pee Sur Nivelle lokuphola iziko (imizuzu 2), kunxweme Saint Jean de Luz (imizuzu eli-15 ukuya ku-20) kunye nogu Anglet kunye Biarritz (imizuzu eli-15 ukuya kuma-20).
Ukuba ukwindawo yomda, kuya kuba lihlazo ukungafumani esinye sezona zixeko zintle zaseSpain: iSan Sebastien kunye nembali yayo (engaphantsi kwemizuzu engama-30).
Kuba ezemidlalo, uya kuba intliziyo zonke ezininzi bentaba mnandi yasekuhlaleni (Mondarrain e Itxassou imizuzu emi-5 kude, Chemin des Trois Croix e Espelette kunye Wolek kwimizuzu emi-2 kude, La Rhune imizuzu engama-20 kwaye abaninzi ngakumbi.. .).
Ukuhlala kufutshane nathi, siya kuba nakho ukuphendula ngexesha lokwenyani kuyo nayiphi na ingxaki edibene nayo nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho.
Ayisoloko ikhona, unokubuliswa ngabantu abanomtsalane kunye nombuki zindwendwe uAurélie okanye uNicolas.
Nje ukuba ubhukisho lwenziwe, iinombolo zabo zefowuni ziya kwaziswa kuwe.